Askari sideed sano ka hor dil geystay oo baxsad ahaa ayaa la soo xiray si loo marsiiyo cadaalada… – Hagaag.com
Askari sideed sano ka hor dil geystay oo baxsad ahaa ayaa la soo xiray si loo marsiiyo cadaalada…
Taliska Ciidanka Booliska Somalia ayaa maanta shaaciyey in la soo xiray askari ka tirsanaa ciidankaas oo 8 sano ka hor ku dilay Muqdisho labo haween oo uur lahaa.
Dable Abshir C/llaahi Basey ayaa bishii Maarso ee sanadkii 2012 ku dilay Suuqa degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho Dabaho Calasow oo ka mid aheyd ganacsatada rootiga iibiya iyo Nimco Xasan Cali oo wax ka iibsaneysay.
Goob joogayaal xiligaas ku sugnaa goobta ayaa sheegay in askariga uu kun shilin oo ka dhinaa 3 kun oo uu weydiistay marxuumada rootiga iibin jirtay darteed uu u dilay hooyooyinkan oo labada uur lahaa.
“Dabagal iyo baaritaan ay sameeyeen Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayey ugu dambeyn ku soo qabteen askariga 8-da sano ka hor geystay dilka labada haween ka dib dacwad ay u soo gudbiyeen ehelada labada marxuum” ayuu yiri afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Waxaa uu intaas ku daray in askarigan ay haatan ku socoto baaris, lana horgeyn doono Maxkamada ku shaqada leh dhowaan si cadaalada uu u wajaho, waxaana talaabadan si weyn u soo dhoweeyey ehelada labada marxuum oo muddo dheer sugayey iney cadaalad helaan.